विजनेश Archives - Page4of5- Voice Of Nepal
मंगलबार, पौष २१, २०७७
काठमाडौं । कोरोनाको महमाकारीका कारण समस्यामा परेका ऋणीहरुलाई करिब १३ अर्ब रुपैयाँ ब्याज छुट दिएका छन् । कोरोनाका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा परेको असर र बैंकहरुले दिएका सुविधाहरुबारे नेपाल राष्ट...
अहिलेसम्मकै ठूलो आइपीओ बिक्री गर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकलाई धितोपत्र बोर्डको अनुमति
आइतबार, पौष १२, २०७७
काठमाडौं : नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकले ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आइपीओ बिक्री गर्न धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति पाएको छ । बैंकले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँ दरको ८ करोड कित्ता आइपीओ बिक्री गर्न अनुमति पाएको हो...
सरकारी राहत प्याकेज उपयोग भए अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ : अर्थमन्त्री
शनिबार, मंसिर २७, २०७७
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्रमा कोभिड-१९को महामारीको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्रले लाभ लिन सक्नुपर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रक...
प्रभु लाइफको इन्स्योरेन्सको आईपीओ सोमबारदेखि खुल्दै, कति गर्ने लगानी ?
कस्तो छ कम्पनीको अवस्था ? कति पुग्ला मूल्य ? काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सको आईपीओ सोमबारदेखि खुल्दैछ । नयाँ लाइसेन्सप्राप्त जीवनबीमा कम्पनीमध्येको दोस्रो आईपीओको रुपमा प्रभुले ६० करोड रुपैयाँ...
नेप्से परिसूचक ७० अंकले बढ्यो, व्यापारबाहेक सबै समूह हरियाली
काठमाडौं । साताको चौथो कारोबार बुधबार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक ७० अंक भन्दा माथिले उकालो लागेको छ । नेप्सेमा कारोबार हुने व्यापार बाहेक अन्य सबै समूहहरु बढेर हरियाली देखिदा नेप्से परिसूचक ७० द...
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र ढकाल निर्वाचित भएका छन् । शनिबार भएको निर्वाचनमा आफ्ना प्रतिद्वन्द्वी किशोर प्रधानलाई पराजित गर्दै उनी वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी भएका ...
प्रभु लाइफ इन्योरेन्सलाई आईपीओ निष्काशन गर्न अनुमति, ६० करोडको सेयर आउने
काठमाडौं । प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्सले आईपीओ निष्कासन गर्ने अनुमति पाएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले प्रभु लाइफलाई साधारण शेयर निष्कासनका लागि अन्तिम स्वीकृति दिएको हो । प्रभु लाइफले ६० करोड रुपैंया ब...
यो साता तोलामै ३ हजारले सस्तियो सुन, मूल्य अझै घट्ला ?
काठमाडौं । यो साता नेपाली बजारमा सुनको भाउ ओरालो ट्रेण्डमा रह्यो । साताको पहिलो दिन ९४ हजार तीन सय रुपैयाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ साताको अन्त्यमा तीन हजार रुपैयाँले घटेर ९१ हजार तीन सय रुपैयाँमा झर्...
बाबुराम भट्टराईसहित ३३ सांसदले फिर्ता गरेनन् दसैं भत्ता
काठमाडौं । गत कात्तिक पहिलो साता सांसदहरुले दसैं भत्ता लिएको समाचारले धेरैको ध्यान तान्यो । यो विषयलाई सामाजिक सञ्जालमा बहसको विषय बनाउन पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का संघ...
काठमाडौं । रेमिटेयान्सको आप्रवाह साउन महिनामा समेत अत्यधिक देखिएको छ । जेठ महिनामा ९४ अर्ब ३ करोड र असारमा १ खर्ब १६ करोड रुपैंया भित्रिएको रेमिट्यान्सको आप्रवाह साउन महिनामा समेत उस्तै देखिएको हो । ...